Taktika Media Sosialy 10 izay mampiroborobo ny fizarana sy ny fiovam-po | Martech Zone
Taktika Media Sosialy 10 izay mampiroborobo ny fizarana sy ny fiovam-po
Zoma, Jona 11, 2021 Alarobia, Oktobra 13, 2021 Rekha Pant
Mifanohitra amin'ny eritreritry ny besinimaro, ny marketing amin'ny haino aman-jery sosialy dia mihoatra ny hoe mifanaraka amin'ny lahatsoratrao amin'ny Internet. Tsy maintsy mamorona atiny mamorona sy manan-kery ianao - zavatra mety hahatonga ny olona hanao hetsika. Mety ho tsotra toy ny olona mizara ny hafatrao na manomboka fiovam-po. Tsy ampy ny tiako sy ny fanehoan-kevitra vitsivitsy. Mazava ho azy, ny tanjona dia ny hivezivezy any ivelany saingy inona no tokony hatao hanatanterahana izany?
Amin'ity lahatsoratra ity dia mandanjalanja ny paikadin'ny media sosialy izahay izay manatsara ny fizarana sy ny fiovam-po misy anao. Ahoana no hataontsika mba hanaovan'ny olona zavatra momba ny lahatsoratray? Inona no hanosika azy ireo hizara ilay lahatsoratra? Izahay dia mitanisa torohevitra mahasoa ho anao:
Ny olombelona dia manana fironana voajanahary amin'ny fametrahana ny heviny amin'ny hafa. Na dia toa mahasosotra aza izany, dia azonao atao ny mampiasa azy io ho tombontsoanao ary hanao fanadihadiana! Ireo sehatra media sosialy dia manolotra endrika fandatsaham-bato na fanadihadiana ka araraoty izany. Azonao atao ny mandefa zavatra tsotra toy ny toerana fialan-tsasatra tsara kokoa, izay tokony hosotroinao, na raha heverin'izy ireo fa tokony hokapainao ny volonao na tsia. Azonao atao koa ny mampiasa azy ity hahafantarana bebe kokoa ny safidin'izy ireo amin'ny fanontanianao momba ny loko, inona ny hetsika tian'izy ireo hatao, na ny serivisy tadiavin'izy ireo. Ny zavatra tsara amin'ny fanadihadiana dia ny nahatonga azy ireo ho fanontaniana tsy ampoizina ka tsy hatahoran'ny olona ny hanome ny karany roa.
Angataho izy ireo hiditra amin'ny fifaninanana
Nahazo mpanaraka ny ankamaroan'ny bilaogera tamin'ny alàlan'ny fanombohana fifaninanana. Mampiroborobo ny fisianao amin'ny Internet izany, ary mahazo fiovam-po vetivety ianao satria mila manao zavatra ny mpitsidika ny pejy mba hahafahan'izy ireo ho anisan'ny fifaninanana. Azonao atao koa ny mampiasa an'io fotoana io hampiroboroboana ny pejinao sy hanatsarana tsy ny tiana sy ny fizarana ihany fa ny tahan'ny fiovam-po koa.
Manomboha fivoriana Q&A
Raha te hampitombo ny fahalalanao momba ny mombamomba ireo olona mitsidika ianao na misintona tampoka ny lahatsoratrao dia mitazà fivoriana sy valiny. Mety izany satria na hiaiky izy ireo na tsia dia tena tian'ny olona tokoa izany rehefa misy mangataka ny heviny. Tanteraka ny filàna iray rehefa misy mangataka fanazavana aminy. Ity dia fomba tsara indrindra hahitanao bebe kokoa ireo olona ao amin'ny tambajotrao ary hamolavola paikady izay hanampy ny fironana amin'ny ho avy.
Mihetsika ireo sary ireo?
Midika izany fa, mampakatra horonantsary. Tsara ny sary iray, saingy tsy azontsika lavina fa ny isan-jaton'ny mpampiasa an-tserasera goavambe dia liana amin'ny atiny video. Araka ny fanadihadiana iray nataon'ny Social Media Examiner fantatsika rehetra amin'ny Facebook, ny mpampiasa dia mandany ora zato tapitrisa mijery horonantsary isaky ny andro. Araraoty izany ary ampitomboy ny tahan'ny fiovam-ponao amin'ny fampidinana horonantsary misimisy!
Image Credit: Buffer Social
Raha mandefa indray mandeha isan-kerinandro fotsiny ianao dia tsy mahagaga raha ambany ny fisian'ny Internet. Ny zava-dehibe indrindra tokony ho tadidinao dia izao: ny fifandraisanao amin'ny haino aman-jery sosialy dia mifandray mivantana amin'ny fahita matetika amin'ny hafatrao. Ankehitriny, miankina amin'ny sehatra media sosialy ampiasainao ny matetika. Raha Facebook dia azonao atao ny mandefa farafahakeliny indray mandeha isan'andro, fa raha mampiasa Twitter ianao dia mety mila mandefa farafaharatsiny indray mandeha isaky ny adiny roa mba hitazomana ny fisianao amin'ny Internet.
Miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingana ny zava-drehetra, lasa tsy manam-paharetana ny olona. Ny sakafo haingana dia alaina mora foana amin'ny sakafo fisakafoanana tsara satria tsy vonona hiandry ny sakafony intsony ny olona. Toy izany koa ny zavatra apetrantsika amin'ny Internet. Raha teny be loatra io dia matokia fa holalaovin'ny olona fotsiny io. Mba hamahana izany dia avadiho ho lasa infographic ilay lahatsoratra. Ny fanehoana an-tsary ny fampahalalana amin'ny endrika statistika, data, na fampitahana samihafa dia ankafizin'ny mpamaky kokoa, noho izany dia zava-dehibe ny infographic. Ho famoronana sary dia azonao atao ny milatsaka amin'ny fitaovana toy izany Canva ary mahazoa aingam-panahy amin'ny fomba famoronana infografika izay tsy misarika ny saina fotsiny fa mampitombo ny fiovam-po koa.
Ny fihomehezana no fanafody tsara indrindra
Mila fihomehezana tsara ny tsirairay indraindray ary avy eo mampakatra sary mihetsika GIF na meme isaky ny afaka ianao. Azonao atao izany mba hikitika ny vazivazy amin'ny hafatrao. Ankehitriny, tsy ny hampihomehy ny olona fotsiny izany; io koa dia ny fampisehoana amin'ny olona fa mora hatonina ianao fa manana hatsikana ao aminao. Mora mifandray foana ny olona mampihomehy. Ho gaga ianao amin'ny hafainganan'ny fitomboan'ny fizarana sy ny fiovam-po raha vao mampakatra meme ianao.
Ataovy mora amin'ny olona ny mizara ny hafatrao
Iray amin'ireo lesoka mahazatra indrindra ataon'ny mpitory ny mampakatra ny atiny ary manantena ny olona hahita ny toerana misy ny bokotra fizarana. Na eo amin'ny sehatra media sosialy ianao na tranokala, dia alao antoka fa hita ny bokotra fizaranao sosialy.
Malaky rehefa mamaly amin'ny hafatra
Hamarino tsara fa mamaly ny hafatra sy ny hevitra avy hatrany ianao. Kely ny fotoana ialan'ny olona ary tsy liana intsony izy ireo rehefa ela loatra vao misy mamaly ny fanontaniany. Rehefa mamaly ny hafatra eo noho eo ianao dia manome ny fahatsapana fa mavitrika amin'ny Internet ianao ary afaka manome izay ilain'izy ireo amin'ny fotoana rehetra. Azonao atao ihany koa ny mampandeha valiny mandeha ho azy mba hampahafantarana azy ireo fa nahita ny hafatr'izy ireo ianao ary hamaly azy ireo amin'ny fotoana misy anao. Mbola tsara kokoa izany raha oharina amin'ireo "hita" mipoitra eo amin'ny boaty hafatra satria izany dia hahatonga azy ireo hahatsapa fa minia tsy miraharaha azy ireo ianao.
Manehoa hatsaram-panahy hatrany
Eritrereto ireo kaonty media sosialy arahinao. Fa maninona no manaraka azy ireo ianao? Aoka ianao ho karazana kaonty media sosialy izay tianao ahitanao fanavaozana hatrany. Manaova resadresaka foana, ary asio tag ny olona notanisinao anarana satria izany dia hahatonga azy ireo hahatsapa fa manome lanja azy ireo ianao. Mametraha tombony amin'ny famoronana atiny, ary ampirisiho ny hafa indrindra raha mieritreritra ianao fa ny asany dia zavatra tian'ny mpanaraka anao. Malala-tanana amin'ny fizarana tantara, fomba fijery, fampahalalana, zavatra izay ho sarobidy amin'ny mpanaraka anao. Rehefa tsy matahotra ny hampiroborobo ny hafa ianao dia hahatsapa izany ny mpanaraka anao ary hamporisika azy ireo hizara bebe kokoa ny hafatrao.
Disclosure: Martech ZoneRohy miasa ao amin'i Canva no ampiasaina ato amin'ity lahatsoratra ity.
Tags: fampiroboroboana ny fizaranabufferfifaninananahatsikanasarymitombo ny fiovam-pohatsaram-panahyMarketing Infographicslahatsoratra matetikaQ & A sessionfanontaniana sy valinyfizaranasary media sosialyvalin'ny media sosialyfizarana media sosialyfanadihadiana
Rekha Pant, matihanina amin'ny informatika, B.Tech avy ao amin'ny RGPV University, Bhopal, India. Miaraka amin'ny asany IT, izy koa dia nanova ny tenany ho lasa mpanoratra mahay manoratra lohahevitra samihafa amin'ny Digital Communication, Education, Marketing ary IT. Miaraka amin'ny talentany tsy fahita firy, dia namoaka bilaogy ace ho vahiny amin'ny tranokala maro izy.
Fanadiovana nomerika: Ahoana ny fomba hivarotana ny fanananao aorian'ny COVID amin'ny fiverenana tsara